Usadonhedze hunyengeri hwe "Nharaunda Iripo" | Martech Zone
Foni yangu inorira muswere wese. Kazhinji nguva ini ndiri mumisangano nevatengi asi pane dzimwe nguva yakagara yakavhurika padhesiki rangu ini ndichiita kuti basa riitwe. Kana foni ikarira, ndinotarisa uko uye panowanzo kuve nenhamba yenzvimbo dzinosvika 317. Zvisinei, nhamba yacho haisi mumazita angu saka handione anenge ari iye ari kundidaidza. Ndiine vanhu vanopfuura zviuru mazana mana munhare yangu - inowirirana ne LinkedIn uye Evercontact… Ndinonyatsoziva munhu wese anondidaidza.
Asi izvi zvakasiyana. Iyi ikambani yekutengesa inobuda inobvisa iyo 317 kodhi yenzvimbo kuyedza nekuvandudza mikana yekuti ini nditore foni. Mukutaura naBill Johnson - mutengi wedu, nyanzvi mukutengesa kwekunze, uye muvambi we Salesvue, izvi zvinozivikanwa se kuvapo kwemunharaunda uye ndiyo yekurapa kwekupedzisira tekinoroji yekubuda.
Heino muenzaniso kubva RingDNA:
Dambudziko nekuvapo kwemunharaunda nderekuti rinobva rangotanga kukwazisana pakati pemutengesi uye tarisiro ine kusatendeseka kuroorana. Muzuva rino nezera, apo vatengi vari kuda kujekesa nekuvimbika kubva kumakambani, izvi zviri mukupesana kwakananga.
Kuvapo kwemunharaunda yakapararira uye iri kukura muindasitiri… uye zvakare inonyengera uye yakapusa mumaonero angu. Ini handisi kuyedza kurova paRingDNA - ndemumwe wemazana evatengesi vanotengesa iyi mhinduro uye yekutanga yandakawana vhidhiyo paYouTube. Asi nepo iyo RingDNA vhidhiyo ichikanganisa huwandu hwenhare dzakapindurwa kana kudzoserwa, haipe ruzivo rwekukuvara kwakaitwa pakutengesa kwako uchishandisa iyi nzira yekunyengera.
Doug Hansen, Sr. Manager weAccount Development Dzokai, nekusaziva vakatora runhare kubva kumutengesi uyo akambodaidzira yavo yemuno-dial dial kugona. Pakarepo akafunga zvishoma nezve kuvimbika kwemutengesi kunyangwe aiziva pamberi pezvavaiita.
Ndine makore anopfuura makumi matatu ruzivo mukutengesa, kusanganisira kutsvaga parunhare uye ndakayedza pamwe neakawanda senge matekiniki akasiyana ekuunganidza ekudzosa mafoni kana kutora-semunhu. Ndichiri kunzwisisa kukwezva kwe nhamba dzemuno kuti vaoneke pane wekudaidzira wekufonera id, ini ndinoona kuti kudaro kazhinji kuraira tarisiro yavakange vatsauswa vanotora uye inogadzira chipingamupinyi chekusaremekedza icho chinoda kutyorwa pakutanga. Nepo hunyanzvi uhu huchibudirira mukusvika kune iyo tarisiro nekukurumidza ivo vanofambisawo kuti isu hatisi pachena uye takananga munzira yedu uye tinokanganisa nzira yehukama hwekuvimba.
Doug akazvitaura zvakakwana. Kunyangwe kana chiyero chekupindura chichiwedzera kana iwe uchifona mukati nekodhi imwechete yenzvimbo, ini handigone kufungidzira kuti uri kutendeuka mwero kuri kuwedzera nayo. Ini zvakare handigoni kutenda kuti hausi kuisa iyo yose yekutengesa kutenderera panjodzi nekutanga kure netsoka inonyengera.
Kuvimba uye chokwadi makiyi ekutengesa kwese. Usazviisa panjodzi nekutora makodhi enzvimbo!
Tags: kodhi yenzvimboachidanakuvapo kwemunharaundakutengesa kwakabudaKugonesa Kugonesarunhare
May 5, 2014 pa 9: 11 AM
Ehe, iyi ndeimwe yeaya manomano akapfuura nguva yekupera kwayo. Mwedzi gumi nemana yapfuura izvi zvakandinyengedza pamafoni ekutanga, zvino chero chinhu chisingarove ID yekufona hachiregererwi…
Aug 3, 2015 pa 12: 30 AM
Kunyangwe izvi zvichinyatso kuoneka sekunyepedzera, zvakaoma kufuratira yakawedzera mhinduro shanduko uye kushandiswa kuri kushanda zvakanyanya panguva dzemamiriro ezvinhu A. mutengi akakumbira kufona kana B. mushandisi wekupedzisira mutengi. Zvino, kana uri kutengesa muC-suite kana maakaundi ebhizinesi, usashandise kuvepo kwemuno. Asi maererano netrust, ini ndanga ndashandisa chishandiso ichi pamberi (panguva iyoyo kutengesa kune vatengi) uye kuvimba KWAKANGA KUSARASIKE. Yaizounzwa nguva dzese - "Muri varume veko" umo ini ndaivaudza nezveyedu intuitive foni sisitimu uye ndopedzisa chirevo ne "akanaka akangwara handiti?" Isu tese tichava nekuseka uye kuenderera mberi nekutengesa kufona. Zvichakadaro, iyo mhinduro yekuwedzera yakawedzera pamusoro pe400% mune iyo chaiyo yekushandisa. 4x mikana yekuvhara bhizinesi. Ndichatora izvo zvipingamupinyi chero zuva.
Aug 3, 2015 pa 10: 54 AM
Kune akatiwandei eanonyengera ekushambadzira marongero anovandudza mhinduro uye shanduko mitengo mune yega svikiro, Ryan. Iwe unotora zvinopesana, ini handisi fan uye handitendi makambani akanaka ane zvigadzirwa zvikuru uye masevhisi anoda kuita zvinhu nenzira iyi.
Gumiguru 6, 2015 na2: 15 PM
Izvi hazvingarangarirwe kutyorwa kweChokwadi muCaller ID Mutemo wa2009 here?
Gumiguru 6, 2015 na11: 23 PM
Ini handisi gweta, asi handitende kuti pane chero mutemo unoda kumanikidza kodhi yenzvimbo kuti ifanane nenzvimbo chaiyo yemuridzi. Funga nezve yako nharembozha… ndinogona kunge ndiri muLas Vegas ndofonera mumwe munhu uye "317" ndichiri kunyoresa.